आज मे ५ तारिख अर्थात् विख्यात दार्शनिक कार्ल मार्क्सको २०२औँ जन्मदिन। – Complete Nepali News Portal
आज मे ५ तारिख अर्थात् विख्यात दार्शनिक कार्ल मार्क्सको २०२औँ जन्मदिन।
प्रजातन्त्रको शाब्दिक अर्थ जनताद्वारा चलाईने शासन व्यवस्था भन्ने बुझिन्छ । राजनैतिक अर्थमा प्रजातन्त्र त्यस्तो शासन व्यवस्था हो जसमा जनमत प्रतिविम्बित भएको हुन्छ । जहाँ जनताको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको हुन्छ । जनताहरु आफ्ना हकहित र अधिकारका सम्बन्धमा अत्यन्त सजग हुन्छन् । वाक स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता, मानव अधिकार (ह्युमन राइट) जस्ता कुराहरु प्रजातन्त्रका गहना मानिन्छन । यसको अर्थ छाडापन र मुखमा जे पायो त्यहि बोल्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता होईन । हरेक कुराका आ–आफ्नै सीमा र गरिमा हुन्छन । त्यसैको परिधि भित्र रहेर जस कसैको पनि स्वच्छ सैद्धान्तिक आलोचना समालोचना, चित्त नबुझेका बिषयहरुमा यस्तो हुनुपर्छ भन्ने किसिमको सुझाव राख्न, अनुशासन र मर्यादालाई शिरोधार्ध गरेर बोल्नु लेख्नु नै प्रजातान्त्रिक चरित्र हो न की छाडापन र अश्लिल गाली गलौज ।
“प्रजातन्त्र भनेको जनताका लागि जनताद्धारा निर्वाचित जनताको सरकार हो ।” “म प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्दछु किनभने यसले प्रत्येक मानव मात्रको उर्जालाई उत्सर्जन गर्दछ ।”–उड्रो विल्सन
“प्रजातन्त्र भनेको म तिमी जति कै असल छु भन्ने होइन तिमी पनि म जति कै असल छौ भन्ने धारणाको विकास हो ।”– थियोडोर पार्कर
प्रजातन्त्रको मलजलमा राष्ट्रियता हुर्कन्छ । प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता अन्योन्याश्रित आर्थिक विकास जो आधुनिकिकरण मुख्य प्रमाण र कारण दुवै हो पनि राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रमा गाभिन पुगेको छ ।– वी.पी. कोईराला
गरीबहरूले गर्ने अपराधलाई सञ्चारमाध्यमले ठूलो स्थान दिन्छन् जबकि नेताहरूले गर्ने अपराधको घटनालाई दबाउँछन्।”
कार्ल मार्क्स – यसरी विभिन्न व्यक्तिहरुले प्रजातन्त्रको परिभाषा आ–आफ्नै किसिमले गरेका छन । आज प्रत्येक मानव कंठको एउटा प्रिय शब्द बनेको छ प्रजातन्त्र । के बालक, के युवा, के पौढ, बृद्ध सबै यसका लागि मरिमेटेका छन । प्रजातन्त्रमा के त्यस्तो जादु छ जसले यी तमाम मानिसहरुलाई यसरी आर्कषण गरि रहेको छ ? यहि प्रजातन्त्रका लागि कैयौं प्रजातन्त्रपे्रमीहरु तानाशाहीका बलिबेदीमा होमिएका दारुण कथाहरु स्वतन्त्रताको माग गर्ने स्वतन्त्रता प्रेमीहरु जेलका चार दिवारी भित्र बन्दि बनाइएका सत्यताहरु हाम्रा सामू देखिन थाल्दछन् ।
प्रजातन्त्रको विकास क्रम र यसको नेतृत्वको पुख्यौली इतिहास पट्टि दृष्टि दिने हो भने हामी इतिहास लेखिन थाले भन्दा पनि अधिको समयमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचारधाराको शुरुवात धेरै बर्ष अघि शुरु भएको पाईन्छ । परन्तु प्राग एतिहासिक समयमा नै प्रजातान्त्रिक विचारधाराको सफल विजारोपण भएको प्रमाण हामी विभिन्न धार्मिक दृष्टान्तहरुबाट पाउँदछौं । शिव, कृष्ण, राम, इशामशीह मुहम्मद, बुद्ध आदि समाजवादी चरित्र मानिन्छन । शिवभन्दा ठुलो समतावादी को हुनसक्छ जसको न कुनै घर थियो न त आफ्नो भन्ने केही थियो । उनी बाघको छाला ओडेर खरानी घसेर हिड्थे । कृष्ण अन्याय र अत्याचारको समुल नष्ट गर्दथे । क्राईष्ट भन्थे –“बरु सियाको नाथ्रीबाट उँट छिलो तर स्वर्गको ढोकाबाट शोषक छिने पाउने छैन ।” यस किसिमको प्रजातान्त्रिक नेतृत्व आज पनि प्रजातन्त्रका लागि त्यो नेतृत्व सदा अनुकरणीय बनी रहनेछ ।
कुनै पनि क्रान्तिमा नेतृत्व असल हुनुपर्छ । अन्यथा क्रान्तिको बाटोले नराम्रो मोड लिन सक्छ । सहि नेतृत्वको कमिमा कुनै पनि सिद्धान्त र व्यवस्थाले धाराशाही हुनुपर्छ, कलंकित बन्नुपर्छ । जब नेताहरले बाटो बिराउछन तब क्रान्तिले नराम्रो मोड लिन्छ । जन हितको हत्या हुन्छ ।विश्वका यस्ता उदाहरणहरु हामी फ्रान्सको राज्यक्रान्ति, बेलायतको क्रान्तिलाई लिन सक्छौं । फ्रान्सको क्रान्तिले सुव्यवस्था ल्याउन चाहेर पनि नेतृत्वको कमिले नेपोलियन तानाशाहा बने । बेलायतको औद्योगिक क्रान्तिले शोषण रोक्न सकेन झन बढ्यो । मालिक मजदुर बिच द्वन्दको पर्खाल सिर्जना भयो । यसैलाई दृष्टिगत गरी रोवर्ट ओवेन भन्ने व्यक्ति कसिए र उनले टे«ड युनियन र उपभोक्ता सरकारी दोकान स्थापना गरे । आफ्नो सहि नेतृत्वले उनि आज पनि मजदुर संगठन र सहकारी आन्दोलनका जन्मदाता मानिन्छन ।
रुषी धुरिबाट आर्थिक समानताको चर्को नारा आयो, माक्र्सको सिद्धान्त पुष्टि गर्दै रुषी खेमाका राष्ट्रहरुले युद्ध छेडे । प्रजातन्त्र र वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई उनिहरुले बिर्से । प्रजातन्त्रलाई आर्थिक समानताको बाधक तत्व ठहर्याए । अर्को तिर अमेरिकी धुरीबाट प्रजातन्त्रको मनमोहकतामा आर्थिक समानतालाई पन्छायर राजनैतिक स्वतन्त्रता र वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई बढवा दिए । यसरी यी दुई राष्ट्रहरुले केही दशक आ–आफ्नै पारामा विश्व राजनितिलाई घुमाए ।
जसरी पूर्वी युरोपका जनताहरुले मान्छेलाई कैद बनाउने बर्लिन पर्खाललाई धवस्त पारे ठिक त्यसैको केहि महिना बित्दा नबित्दै नेपाली जनताहरुले त्यसैबाट प्रभावित भएर नेपाली काँग्रेसको (गणेशमान सिंहको घरमा) सम्पन्न भेलाले जनआन्दोलनको तिथी तोक्यो । विश्वका दुई विपरित धु्रव मानिने साम्यवादी र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरु कार्यगत एकतामा उभिए । यो नै नेपालको जनआन्दोलन मात्र नभएर विश्वमा अनुकरणिय दृष्टान्त सावित भयो । गणेशमान सिंहलाई कमाण्डर बनाएर शुरु गरिएको जनआन्दोलनको ५० दिन पनि बित्दा नबित्दै पंचायती निरङकुशता जीर्ण पर्खाललाई नेपाली जनताहरुले ढलाई छाडे । “२०४६ साल चैत्र २७ गते” यसरी कैयौं शहिदहरुको उत्र्सगपछि हजारौ योद्धाहरुको विरतापछि नेपाली धर्ति र आकाशमा प्रजातन्त्र आएको छ । यसका पछाडी बलियो नेतृत्व थियो । जसले रैसिबाट दुनियालाई नागरिक बनाएको छ । सम्मानपूर्ण जीवन यापन गर्ने सु–अवसर प्रदान गरेको छ ।
आजको विश्वमा यो अनुपम नेतृत्व सदा अनुकरणीय बन्नेछ । विश्व राजनितिमा प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता कोस एकता कार्यक्रम सफल नभएको वर्तमान विश्व परिवेशलाई नेपालले समयमै बुझ्नुपर्छ । नत्र देश अधिनायकवादी शासनको लौह शिक्रिमा बाधिन सक्छ । यसका लागि प्रत्येकले सहि नेतृत्वको चयन गर्नुपर्ने गम्भिर दायित्व आजको वर्तमान नेपालमा देखिएको छ । प्रजातन्त्र भनेको कसैलाई कुर्सी दिलाउन होईन । जनतालाई वास्तविक अधिकार दिलाउन जनतालाई विकास कार्यमा स्वफुर्तः गराउन, कसैको दबाब बिना समर्पित हुन, आफ्नो ब्रम्हले सहि देखेको प्रजातान्त्रिक नेतृत्च्वलाई अंगाल्न प्रजातन्त्रले अभिप्रेरित गर्दछ । यसो भन्दैमा कसैले गर्न नसक्ने कुराहरु गरेर झुठा प्रलापहरु फैलाएर जनताहरुलाई दिग्भ्रमित पारेर नेतृत्व लिने होड चाल्न पाईदैन । आकासमा रोटी फलाउने जस्ता गैर जिम्मेवारीपूर्ण कुरा गर्नेहरुलाई जनताले झुक्याईदिने छन । प्रजातन्त्रको लागि नेतृत्व लिन आज विभिन्न पार्टीहरु विभिन्न छदम नाममा जनतालाई झुक्याउदै छन । यसबाट बचेर सहि प्रजातान्त्रिक नेतृत्वमा नेपालीहरु जुट्नु परेको छ । प्रजातन्त्रको नव कोपिलालाई फुलाउनु फलाउनु छ ।
यसरी संसारका हरेक क्षेत्रमा विभिन्न व्यक्ति र पार्टीले प्रजातन्त्रको नेतृत्व लिएका छन । प्रजातन्त्रको नेतृत्व सहि व्यक्ति र पार्टीलेगरेको खण्डमा प्रजातन्त्र दिगो बन्छ । यसैमा राष्ट्रको सुन्दर भविष्य र जनताहरुको मुस्कान बर्सिएको हुन्छ । प्रजातन्त्रको नेतृत्वको कुरा गर्दा भारतमा अंग्रेजहरुको कब्जाबाट मुक्ति दिलाई जनताहरुलाई प्रजातन्त्रको विहानी दिलाउने, लोटा र एउटा लट्ठीको भरमा अंग्रेजलाई धपाउने शान्तिका पुजारी, अंहिसाका प्रतिमुर्ति महात्मा गान्धी (बाप्पु)को नेतृत्व सदा अनुकरणीय छ । यसरी विश्वमा महात्मा गान्धी, केनेडी देखि लिएर नेपालका वि.पी. कोईराला, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, पुष्पलाल प्रधान, मनमोहन अधिकारी, गिरिजा प्रसाद कोईराला सम्मका प्रजातान्त्रिक नेतृत्व प्राग ऐतिहासिक समयदेखि लिएर वर्तमान समयसम्म त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यसको सहि छनौटमा मानव समुदायको सुःख, सम्बृद्धि लुकेको छ । यसैमा सबैको भलाई छ । सबैले प्रजातन्त्रको सुखभोग गर्न पाउन कोही प्रजातान्त्रिक हक हितबाट बञ्चित हुन नपरोस् । प्रजातन्त्रको लागि नेतृत्व सहि व्यक्ति र पार्टीले गरोस् । खराब र द्धैध चरित्रका नेतृत्वहरु जहिले पनि विमुख हुन । यो नै आजको आवश्यकता हो ।
तीस वर्ष अगाडी लेखिएको यो निबन्ध का समयावधिमा नेपाली राजनीतिमा ठूलो परिबर्तन आइसकेको छ । प्रजातन्त्र , गणतन्त्र सबै सबैको नेत्रित्वोलाई जनताले देखे भोगे । आज २०० औं कार्ल मार्क्स जयन्ति यिनकै अनुयाई हरुको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले गरेका कामहरुको मुल्यांकन आजको दिनको गरिमा र उपादयता हो ।
(प्रस्तुत निबन्ध पोखरा जेसिसद्वारा आयोजित “जेसिस सप्ताह १९९०” को उपलक्ष्यमा भएको अन्तर क्याम्पस निबन्ध प्रतियोगितामा पश्चिमाञ्चल ईन्जिनियरिङ क्याम्पस पोखराको तर्फबाट सहभागी भई दोश्रो स्थान प्राप्त” |)